Shiinaha HTC EZ Change Floor Diyaarinta Tools Waayo daahan saarid saarayaasha iyo kuwa alaabada | Sunny
PCD loola jeedaa diamond polycrystalline, taas oo la aasaasay cadaadis sare iyo heerkulka sare. Sababtoo ah halka ay iska caabin ah hadal haynta sare, waa wax an fiican ee ka kaxaynta daahan dabaqa, sida epoxy, xabagta, looxa, rinjiga, iwm .. PCD ayaa ku soo beegmay in 2 qaybood: lakabka PCD iyo dhulka hoostiisa carbide tungsten. Sida qalab u qaadidda daahan iyo dabaqa qalab diyaarinta haboon, taas PCD disc shiidi doona waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo on gotaan dabaqa HTC. 2 PCDs quarter oo tayo sare leh si degdeg ah ay ka saareen blaastiigga kala duwan. S Sunny ...
Item No .: SYF-p24
Nooca: isbedel deg deg ah HTC
PCD Details: 2 xabbadood oo quarter wareega PCDs
Miisaanka Net: 0.2kg
Baako: 6 ama 9 gogo '/ box
PCD loola jeedaa diamond polycrystalline, taas oo la aasaasay cadaadis sare iyo heerkulka sare. Sababtoo ah halka ay iska caabin ah hadal haynta sare, waa wax an fiican ee dabaqa daahan saarista s, sida epoxy, xabagta, looxa, rinjiga, iwm .. PCD ayaa ku soo beegmay in 2 qaybood: lakabka PCD iyo dhulka hoostiisa carbide tungsten.
Sida ugu fiican ee qalab u qaadidda daahan iyo dabaqa qalab diyaarinta , this PCD disc shiidi doona waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo on gotaan dabaqa HTC. 2 PCDs quarter oo tayo sare leh si degdeg ah ay ka saareen blaastiigga kala duwan. Tools Superhard Sunny ayaa soo saartay noocyada kala duwan ee qalabka PCD sugi lahaayeen, waayo, gotaan kala duwan. Waxa kale oo aanu bixinaa adeeg OEM / ODM aad shuruudaha gaarka ah.
Previous: 8.5mm sawirqaadida Diamond Wire arkay Waayo, dhagax adag Wajahan
Next: Jaranjarada Qaybaha Nooca 7 inch Wheel shiidi la taaban karo, waayo, gotaan
dabaqa qalab diyaarinta
dubbe baadiyaha rullaluistemadka , baadiyaha saxan dubbe, Bush Hammer Tool Suppliers, madaxa dubbe baadiyaha , qabsatay dubbe baadiyaha , Rotary dubbe baadiyaha ,